Wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland oo baarlamanka ugudbisay waxqabadkeedii sanadka 2011. – Radio Daljir
Wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland oo baarlamanka ugudbisay waxqabadkeedii sanadka 2011.
Garoowe,Dec,14 -Kalfadhiga 27-aad ee baarlamaanka dawladda Puntland ayaa maanta lahor keenay waxqabadka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland ee sanadka 2011 oo xiligaan gabagabo maraya,waxaana fadhigii maanta soo xaadiray 35 Mudane oo baarlamaanka Puntland katirsan.
Wasiirka kuxigeenka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Dr Maxamed Xirsi Ducaale oo baarlamaanka ka jeediyay waxqabadka wasaaradda caafimaadka ee sanadka 2011,ayaa waxaa uu sheegay wasaaradu inay wax badan qabatay oo bulshada Puntland faa’iido u leh,ayna xaqiiqo tahay wax badan inay wali ka dhiman yihiin.
“Waan ognahay in shacabka Puntland naga sugayaan waxqabad aad u balaaran oo ah guri ka guri,ilaa geed ka geed,ilaa tuulada ugu yar arintaana waan ku guda jirnaa” ayuu yiri Maxamed Xirsi Ducaale wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka.
Wasiir kuxigeenka caafimaadka Puntland Dr Maxamed Xirsi Ducaale ayaa dhinaca kale sheegay wasaaraddu inay ka kooban tahay sadex qeybood oo kala ah,heerka xarunta dhexe,gobolada iyo degmooyinka, ayna midkkatsa ay leedahay xarun hoostimaada waaxaha kale.
Shaqada ugu weyn ee wasaaraada ayaa waxa uu ku tilmaamay Wasiir ku xigeenku kahortaga cudurada,daweynta cudurada,daaweynta dhawacyada,la socoshada cafimadka iyo kaalmo kale oo muhiim ah.
Wasiirka ayaa ugu dambeeyntii sheegay inay wasaaradu ku howlan tahay sidii ay shaqadeeda u labo laabi lahayd,ayna u gaari lahayd deegaano horleh.